PCB Factory, mpamatsy - mpanamboatra PCB China
Andininy ho an'ity Rogers PCB Layers ity: sosona 2 Fitaovana: Rogers 4350B matevina amin'ny hazo fototra: 0.8mm hatevin'ny varahina: 1 OZ Fitsaboana ambonin'ny tany: Lokom-bolamena Gold Soldmask miloko: Silkscreen maintso miloko: Fampiharana fotsy: Fitaovana fifampiresahana RF Rogers dia karazana fatra matetika birao novokarin'i Rogers. Tsy mitovy amin'ny tabilao PCB mahazatra io - reso epoxy. Tsy misy fibre vera eo afovoany izy io ary mampiasa base seramika ho fitaovana avo lenta. Rogers dia manana tsy fitoviana diélectrique ambony ...
Ny fampiasana ny hatevin'ny fitaovana dia zava-dehibe amin'ny fananganana PCBS FR4. Ny hateviny dia refesina amin'ny santimetatra, toy ny an'arivony, santimetatra, na milimetatra. Misy zavatra vitsivitsy hodinihina rehefa misafidy fitaovana FR4 ho an'ny PCB anao. Ireto torohevitra manaraka ireto dia hanamora ny fizotry ny safidinao: 1. Misafidiana fitaovana FR4 manify hanaovana takelaka fananganana misy teritery eo amin'ny habakabaka. Ny fitaovana manify dia afaka manohana ireo kojakoja maro samihafa ilaina amin'ny fananganana ilay fitaovana, toy ny kojakoja Bluetooth, USB connec ...